लडेर उठ्ने मान्छे नै अब्बल हुन्छ | nepalbritain.com
लडेर उठ्ने मान्छे नै अब्बल हुन्छ
सुमन गुरुङ, मिस चितवन
‘सबै चम्किने वस्तु हीरा हुँदैनन, असल व्यक्तित्व भएको मानिस सदैव चम्किन्छन्’ भन्दै अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उत्तर दिएर भरतपुर महानगरपालिका–१ की सुमन गुरुङले मिस चितवनको ताज हात पारिन् । नाम सुमन अर्थात् आँशु भए पनि दृढनिश्चयी उनी यतिबेला वीरेन्द्र क्याम्पस भरतपुरमा जेनरल बाइलोजी स्नातक दोस्रो वर्ष अध्यन गर्दैछन् । सुमन मिस चितवन भएसँगै उनको व्यस्तता बढेको छ । उनले मिस नेपालमा वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीसमेत पाएकी छन् । उनी मिस नेपालमा चितवनको नाम चम्काउने सुरमा छिन् । यिनै विषयमा सुमनसँग सिर्जना अर्यालले गरेको कुराकानी :
० मिस चितवन हुँदा कस्तो महसुस भयो ?
– खुसी छु, विजेता बन्ने लक्ष्य पूरा भएको छ ।
० सफलताको श्रेय कसलाई जान्छ ?
– मेरी आमा नै यो सुमनको शक्ति र विश्वास हो, म जे छु सबै मेरी आमा सीता गुरुङको देन हो । मेरा दाइ अमन गुरङ र मिस चितवनका आयोजक, जसले मलाई यो अवसर दिएर जित्ने बाटोे देखाउनुभयो र कोरियोग्राफर सञ्जीव श्रेष्ठलगायतलाई यसको श्रेय दिन्छु ।
० बुबाको भूमिका छैन ?
– मेरो बुवा कस्तो हुनुहुन्छ, बाबाको काख कस्तो हुन्छ, मलाई अनुभव नै छैन । यतिसम्म कि मेरो र बाबाको तस्बिरसमेत सँगै छैन । उहाँले म दुई वर्षको हुँदा संसार छोडेर जानुभयो । उहाँको आशीर्वाद त ममा पक्कै छ होला, यो सफलता बाबाको ऊर्जाबिना सम्भव थिएन । उहाँको साहसी रगतले नै ममा क्षमता आएको हो, आत्मविश्वास जगाएको हो भन्न मलाई किंचित धक लाग्दैन ।
० बुबाको अभाव कत्तिको महसुस गर्नु हुन्छ ?
– (भावकु बन्दै) बाबा भइदिएको भए मेरो शिरमा मिस चितवनको ताज देखेर कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला, म त्यो ताज लगाएर बाबाको काखमा बस्थें । नपाइने कुराको कल्पनामा रमाउनु हुँदैन । बाबाको कमी मामुले कहिल्लै हुन दिनुभएको छैन, मेरो मामुले बाबा र आमाको दुवै भूमिका निभाएर हामीलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनु भएको छ ।
० तपाईं विज्ञानको विद्यार्थी, यस्तो सुन्दरी प्रतियोगितामा कसरी सहभागी हुनुभयो ?
– सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छाशक्ति हो । मलाई सानैदेखि नै यस्ता कन्टेस्ट मनपथ्र्यो । मैलै एसएलसी दिएपछि मिस एसएलसीमा सहभागी भएँ । त्यसक्रममा म शीर्ष १६ भित्र परेकी थिएँ । इन्टर पढ्ने बेला म्यानेजेमेन्ट लिएर पढ्नु भन्ने मामु, दादाको सल्लाह थियो । तर मैल ऐपेक्स कलेजमा विज्ञान विषय लिएर पढ्ने निर्णय लिएँ । पढ्ने क्रममा मिस तमुस्योमा पनि सहभागी भएँ र अन्तिम चारमा पर्न सफल भएँ । पढाइमा पनि कुनै असर पर्न दिइनँ, राम्रो अंक ल्याएर पास गरें । गर्छु भन्ने संकल्प भयो भने पूरा गर्न सकिने रहेछ ।
० मिस चितवनको ट्यालेन्ट सोमा अभिनय पनि राम्रो गर्नुभएछ नि ?
– मिस चितवनको उपाधि जितेपछि त राम्रो नै गरेछु जस्तो लाग्यो । त्यो सो हेर्ने दर्शक र प्रतिस्पर्धी साथीहरूले पनि राम्रो गरेको भन्दै ममा उत्साह थप्नुभयो । अभियन मेरो सौख हो । मेरो अभियनयलाई मिस चितवन प्रतियोगिताले सार्वजनिक गर्ने अवसर पनि दियो ।
० त्यसभन्दा पहिला अभियन गर्नुभएको थिएन ?
– गर्थें, तर ऐना अगाडि मात्र । मिस चितवन प्रतियोगिताले मलाई सार्वजनिक रूपमा अभिनय कला देखाउने अवसर पनि दियो ।
० तपाईका अरु पनि सौख छन् ?
– मलाई नाच्न पनि मनपर्छ, फुर्सदको बेला मेकअप, आर्ट अनपेपरमा गर्न मन लाग्छ । दुलही पनि राम्रोसँग सिंगार्छु, मोडलिङमा पनि सौख छ ।
० भोलिका दिनमा तपाईंलाई कुन क्षेत्रमा देख्न पाइएला ?
– अभियन कला नै मेरो प्राथमिकतामा पर्छ । सम्भवतः त्यही क्षेत्रमै देख्न पाउनु हुन्छ । जेनरल बाइलोजी लिएर पनि उच्चशिक्षा हासिल गर्दैछु । अभिनयसँगै अध्ययनको विषयलाई पनि पेसा बनाउन सक्छु ।
० खानामा सौख ?
– खानामा त खासै चुजी छैन, जस्तो पनि मनपर्छ । मासुको परिकार मनपर्छ, खानामा मासु भयो भने खुसी लाग्छ, चिकेन चाउमिन मेरो रोजाइको खाना हो ।
० फिगरले त मासु खाए जस्तो लाग्दैन ?
– मासु मज्जाले खान्छु । शरीरका लागि सन्तुलित भोजन आवश्यक छ, तर साथमा व्यायाम पनि जरुरी हुन्छ । म हरेक दिन बिहान र बेलुका योगा, एरोविक, डान्सलगायत शारीरिक व्यायाम गर्छु ।
० आफ्नो तौल र उचाइप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– उमेरअनुसार मेरो तौल र उचाइ औसतमा सन्तुलित छ भन्ने ठान्छु । अहिले म ४७ केजी ५ फिट ४ इन्च अग्लो छु । यो उचाइ मिस नेपाल प्रतियोगिताका लागि फिट हुन्छ ।
० मिस नेपाल अश्मी श्रेष्ठलाई पहिलोपटक भेट्दा कस्तो लाग्यो ?
– राम्रो त पहिला नै लाग्थ्यो, पहिलोपटक मिस चितवनको फाइनल राउन्डमा भेटें । उहाँको हातबाट मिस चितवनको ताज लगाउन पाउँदा खुसी लाग्यो ।
० कुन नेपाली नायिकाको अभियन मनपर्छ ?
– सबै नायिकाको भूमिका कुनै न कुनै कोणबाट उल्लेखनीय नै छ, सबै नायिका मन पर्छन् । अहिलेको पुस्ताका नायिका प्रियंका कार्की, साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मीलगायतका नायिकाको अभियन मलाई राम्रो लाग्छ ।
० तपाईलाई मन नपर्ने के हो नि ?
– मलाई नकारात्मक सोच र चिन्तन भएको व्यक्ति मन पर्दैन । इच्छाशक्ति भयो भने मान्छेले सबै कुरा सिक्न सक्छ, तर नकारात्मक सोच र चिन्तन परिवर्तन गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोच नै सफलताको आधार हो, देश र समाज सबैको सफलताको आधार नै सकारात्मक सोच र चिन्तन हो ।
० अन्तमा केही भन्नु छ ?
– हिँड्ने मान्छे नै लड्छ, लडेर उठ्ने मान्छे नै अब्बल हुन्छ । सबैलाई नयाँ वर्ष २०७४ को शुभकामना दिन चाहन्छु ।